नेपालमै यस्तो ठाउँ जहाँ गाईको मासु खाईन्छ तर खसी बाख्राको मासु खाईन्न पुजा गरिन्छ ! – Todays Nepal
नेपालमै यस्तो ठाउँ जहाँ गाईको मासु खाईन्छ तर खसी बाख्राको मासु खाईन्न पुजा गरिन्छ !
वाख्रा र उसको सन्तान खसी बोका काटेर खाने कल्पना समेत गर्न सकिन्न !
नेपाली हिन्दु संस्कारमा गाईको मासु खाने समुदायलाई घृण गरिन्छ । गाई काट्नेहरुलाई कडा कार्वाहीको माग पनि गरिन्छ । अरु समुदायले गाईलाई गौमाताका रुपमा पुज्ने पनि गर्छन् ।
तर, त्यसै धर्मका यस्ता पनि समुदाय छन बरु गाईको मासु खालन तर बाख्राको मासु खाँदैनन् । हाल सम्म ओझेलमा परेको यस्तो रोचक खवर छ कि जुन गाउँमा बाख्रालाई माताका रुपमा पुज्ने गरिन्छ । वाख्रा र उसको सन्तान खसी बोका काटेर खाने कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।
यो अनौठो र ओझेलमा परेको खवर हो गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्वर ४ , साविकको फोक्सीङ्ग गाविसको । त्यस गाउँका राना थरका मगरहरुले बाख्र्रा र त्यसका सन्तानहरु काटेर मासु नखाने गरेका हुन । त्यस गाउँमा चितौरे थरका राना मगरहरुले ४ सय वर्ष अघि देखि वाख्रा , खसी र बोका काटेर मासु नखाने गरेको त्यस गाउँका ८० वर्षिय समाज सेवी पुर्णबहादुर रानाले बताए ।
यस्तो छ पौराणिक कथा : आज भन्दा करिव ४ सय वर्ष अघि त्यस राना परिवारकी एक महिला सुत्केरी भईन । सन्तान जन्माएको केहि दिन मैं उनको मृत्यु भयो । त्यस पछि ति नवजात शिशुलाई बचाउन गाह्रो भयो । उनलाई बाख्राको दुध खुवाइर बचाईयो ।पुर्णबहादुर राना भन्छन त्यस पछि बाख्रालाई आमा अर्थात माताका रुपमा पुज्न थालिएको हो । उनका अनुसार त्यस चितौरे तरका राना फोक्सीङ्गमा एक गाउँमा १४ छन भने अर्को टोलमा करिव १० घरधुरी रहेका छन । त्यसका अलवा वुटवलमा वसाई सराई गरेका २२ घर धुरी छन । ति सवै घरधुरीका नयाँ पिढिले समेत बाखा्रा , खासी र बोकाको मासु खाँदैनन ।
विसावाईसे उमेरका त्यहाँका युवा ऋषि राना भन्छन–‘ दशै पुजामा मैले दर्जनौ पाडाहरुको वली चढाएँ यहि हातले तर वाख्रा काट्ने कुरा मैले कल्पना समेत गर्न सक्दिँन । ‘वाख्रालाई हामी आमा ठान्छौं , उनले थपे–‘कसैले लुकी चोरी देश विदेशमा खाए पनि उसलाई अपसकुन भएको छ । त्यसका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन । एक जनाले विदेशमा बाख्राको मासु खाए पछि यता घरमा उनका परिवारले सपनामा देखे । उनलाई नराम्रो भयो । फेरी अर्का एक जनाले कुल–धर्म छाडेरै क्रियश्चन धर्म मान्न थालेका छन् । ’ उनका अनुसार त्यस समुदायले वाख्रा पाल्छन तर काटनका लागि भनेर बेच्दैनन ।
जसका घरमा माछा मासु पसाल्नै हुन्न : त्यस्तै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ९ साविकको अर्लाङ्गकोट गाविस ददल्का गाउँका टिकानिधी खरालको घरमा जिज्यु वाजे देखि कुनै प्राणीको मासु भित्र पसालेका छैनन । ७४ वर्षिय खराल कुनै पनि प्राणीलाई काटेर हत्या नगर्न हात जोडेर विन्ति गर्छन ।
उनि मुटु भक्कानाउँदै भन्छ –‘ हामी मानवलाई कसैले काटे मारे हाम्रो आत्मा कति दुख्छ ? त्यस्तै हरेक प्राणीको आत्मा पनि त्यस्तै हो , मैले सवै संग हात जोड्छु , कसैले पनि कसैको हत्या गरेर मासुमा नरमाऔं । उनले आँशुका ढिंका खसाल्दै भने –‘ जुन प्राणीलाई हत्या गरिन्छ , उसका पनि त छोरा छोरी , आमा बुवा र सन्तान , आफन्तहरु हुन्छन , कति रुँदा हुन विचरा……..।
जिज्यु वाजेको पाल देखि अपसकुन भए पछि कुनै पनि प्राणीको हत्या गरी घर भित्र मासु पसाल्न नहुने गरेको उनले बताए । त्यही उमेरको हाराहारीमा रहेकी उनकी धर्म पत्नी कृष्णकुमारीले पनि जन्मे देखि अहिले सम्म माछा मासु नखाएको बताईन । छोराहरु कृष्ण प्रसाद खराल र सुदन खराल भन्छन –‘ हामी त देश विदेशमा गएर मासु खान सिकियो तर घर भित्र पसाल्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं । घर बाहिर मात्रै खाने गरेका छौं । साभार न्युज २४
डा.सृष्टि श्रेष्ठ भन्छिन्- यस्तो हुन्छ योनीको क्यान्सरको लक्षण र यस्तो छ बच्ने उपायहरु